Cameron.....: Blog Day အမှတ်တရ....2014
Posted by coral nyo at 23:48
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရကို မိုးငွေ့မရေးရင် ရာဇ၀င်ရိုင်းသွားမှာပေါ့ကွယ်။ ပို့စ်တွေ ပုံမှန်တင်တဲ့သူမို့ပါ။ အရင်က ပို့စ်ဟောင်းလေးတွေရဲ့ ကွန်မန့်ဟောင်းလေးတွေ ပြန်ဖတ်မိတိုင်း ကြည်နူး ၀မ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့ကွယ်….
လက်ကျန်အင်အားစုလေးနဲ့ ဘကုန်းရွာကုို ကာကွယ်ရင်း တုိုးတက်စည်ပင်အောင် ဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့။ များများ ရေးနုိုင်ပါစေသတည်း။
1 September 2014 at 04:03
မမရေ ... ရောက်ခဲ့၏ ... Tag ပိုစ့်လေးဖတ်သွားပါသည် ... Happy Blog Day ပါ ... :)
( အရင်ကတော့ တစ်ပတ်ကို တစ်ပုဒ်လောက်တော့ တင်ဖြစ်ကြတာချည်း...ခေတ်ပြောင်းလာနေတော့လည်း တစ်လတစ်ပုဒ်လောက် ရေးကြရင် မဆိုးဘူးထင်ပါရဲ့...း)
ဘလော့ဂါဘ၀လေးကို ကိုယ်ချစ်တယ်...။ ကိုယ်အသက်ရှင်သရွေ့ စာတွေကို ဒီနေရာလေးမှာ ဆက်ရေးဖြစ်နေဦးမှာပါ-------------တူတူပဲသိလား ဆက်ရေးနေအုန်းမှာ
ပစ်လည်း လာဖတ်သွားပါတယ် မကြီးမိုးငွေ့ရေ
Zaw Win Maung said...
ခင်မင်စွာဖြင့် - မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)
အန် . . ပို့စ်တင်ပါဆို အမှတ်တရ အဟောင်းတွေ ပြန်တင်နေပါလား မမမိုးငွက်ရယ် . .း))) ပို့လေး ကောင်းကောင်းလေးတွေ ထပ်ဖတ်ချင်တယ် . .း)))
ပို့စ်တွေပုံမှန်တင်နေတဲ့သူမို့ အမှတ်တရပို့စ်ရယ်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မတင်တော့တာပါ.. တကယ်တော့ ဘလော့ဒေးအတွက်ပို့စ်က ဘလော့ဂါတွေရင် တစ်နှစ်တာပြောချင်တဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေသာဖြစ်သင့်တာမဟုတ်လား...း)
ခုမှ လာဖတ် :))